Basikety – «Afrique 2018»: resin’ny KP Kenya ny MB2 All | NewsMada
Basikety – «Afrique 2018»: resin’ny KP Kenya ny MB2 All
Tsy mbola mety tafarina mihitsy ny ekipan’ny MB2 All, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, ho an’ny ekipa tompondaka sokajy vehivavy. Fihaonana, tanterahina any Maputo, Renivohitr’i Mozambika. Resin’ny KP Kenya, tamin’ny isa 73 no ho 65, indray mantsy ry Hoby sy ry Monique ary ry Sydonie, omaly teo amin’ny andro fahadimy amin’ny fifanintsanana, ho an’ny vondrona “B”.
Niady tanteraka ny lalao ary tena nanohitra hatramin’ny farany ny MB2 All. Porofon’izany, nifanakaiky hatrany ny isa teo amin’ireo tapa-potoana efatra nilalaovana. Lasan’ny Kenyanina, tamin’ny isa 20 no ho 16, ny 10 mn voalohany. Sahala 12 no ho 12 kosa ny tapa-potoana faharoa. Mbola nitarika, 23 no ho 16, indray ny KPA avy eo ary lasan’ny Malagasy ny tapa-potoana farany, niafara tamin’ny isa 21 no ho 18.
Raha tsiahivina, faharesena intelo misesy ny azon’ny MB2 All, tamin’ity fifaninanana ity: ny nandavoan’ny First Bank Basket Club avy any Nizeria azy, tamin’ny isa 74 no ho 40, teo amin’ny andro voalohany ary ny niondrehany teo anatrehan’ny INSS RD Kongo, tamin’ny isa 71 no ho 51, teo amin’ny andro faharoa.
Anio ny lalao farany ho an’ny MB2 All, hifandonany amin’ny Lakers avy any Zimbaboe.